တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (Insight Meditation Guide notes) – Thabarwa Centre
တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ (Insight Meditation Guide notes)
Oct 13, ’10 10:45 PM
Insight Meditation Guide notes
I’d like to share the Insight Meditation Guide notes in Myanmar & English language.
I do hope this notes will help to develop the right attitude & right view of reality which is the key for insight meditation & getting the real happiness in life as much as I can understand & I have learned it my best in my whole life.
Note: The teaching words are based on teaching of Tsunami Sayadaw U Ottamasara, Sayadaw Tejaniya & some insight meditation teachers that I have ever learned.
Although the guided words may be in controversy little or more in your previous ideas or understanding, I do hope these guide notes will help to develop your right attitude & right view inacertain degree if you try & test it foraenough certain time.
Or you can neglect the idea of disagreement with your previous habitual one and you can accept the idea which accord with your previous one.
But I’d like to advise you to neither GRASP nor REJECT anything so easily.
ဓမ္မ မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား-
ကျွန်ုပ်နားလည်သလောက် လေ့လာခဲ့မိသလောက် စမ်းသပ်လေ့ကျင့်မိသလောက် ဥာဏ်မီသလောက် တရားနှလုံးသွင်းမှုလေးများကို လက်တွေ့ဘ၀မှာရော- တရားအားထုတ်မှုတွင်ပါ တစုံတရာ အကျိုးရှိမည်ဟု မျှော်လင့်လျှက် မျှဝေအပ်ပါသည်။
တရားနှလုံးသွင်းမှုစာသားများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ယခုလက်ရှိ ခံယူထားမိနေသော သဘောထားများနှင့် တခါတရံ ၀ိရောဓိဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ် အတွေ့အကြုံအရ လောဘ-ဒေါသ- သောက-မာန-အတ္တ အယူများကို စသည်များကို တစတစ စွန့်လွတ်လာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် အားလုံးအတွက် ဓမ္မဒါန မျှဝေအပ်ပါသည်။
ဓမ္မဒါန များကို လွယ်လွယ်နှင့်လည်း မသိမ်းပိုက်ရန် လွယ်လွယ်နှင့်လည်း မပစ်ပယ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
တရားနှလုံးသွင်းပုံ မှတ်စုများ အပိုင်း
ပစ္စုပ္ပန်… တရစပ် ပျက်စီးနေတဲ့ အထင်တွေ (အယူအဆတွေ) ပဲ ဖြစ်နေတာပါ…
အနိစ္စသက်သက်ပဲ ဖြစ်နေခြင်း အမှန်တရား ကို နားလည် လက်ခံဖို့
မဖြစ်နိုင်သေးဘူး ထင်နေရင်လည်း အထင်တွေအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ…
အထင်တွေကို … အဟုတ်ထင်နေမှုတွေပဲ တကယ် ဖြစ်နေတာပါ….
Only ever-new impermanent thinking/assuming is happening in reality.
If one think accepting/taking only Anicca (ever-new impermanent nature only) as reality is not ready yet for his/her insight level.
Nothing will happen but the result according to his thinking/assuming.
၁။ တရားထိုင်နေစဉ် လိုချင်မှု၊ ဖြစ်ချင်မှု၊ မျှော်လင့်မှုများ၊ မကျေနပ်မှု စသည့် စိတ်အခြေအနေ သဘောထားများ မထားရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်သား နာယူခဲ့ကြ ပါသည်။ ထိုစိတ်သဘောထားများသည် အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါ၏။
သို့ရာတွင် ထိုစိတ်သဘောထားများထက်ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ ထိုစိတ်သဘောထားများကို ရော၊ ထိုစိတ်သဘောထားများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် စိတ်အခြေအနေ များကိုပါ တကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့အတည်မယူဘဲ … အဟုတ်မထင်ဘဲ… တရစပ် ”ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုသက်သက်ပဲ တကယ်ဖြစ်နေသည်” ဟူသော တူညီသည့် ဒုက္ခသစ္စာ အမှန်တရားကိုသာ လက်ခံရန် အတည်ယူရန်ဖြစ်သည်။
1. We have learned not to have any expectations, not to want anything, not to be anxious, but taking these attitudes as unreality but just ever-new impermanent nature, is more important rather than whether arising of them or not.
၂။ တရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုး ထွက်ပေါ်အောင် ကြိုးစားနေရတာမဟုတ်ပဲ. ဖြစ်လာ သမျှတွေအပေါ် မငြိတွယ်ဖို့ ..မသိမ်းပိုက်ဖို့ .. အာရုံတွေ ဒွါရတွေအပေါ် …. အဟုတ်ထင်နေမှု..အကောင်းအဆိုးအဖြစ်သတ်မှတ် အထင် မှားနေမှု (အ၀ိဇ္ဇာ)ပဲ တကယ်ဖြစ်နေတာ ဟူ၍ ယုံကြည် လက်ခံ နှလုံးသွင်း နိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
2. You are not trying to make things turn out the way you want them to happen. You are trying to accept whatever happening or identifying in the mind as only misunderstanding (identifying).
၃။ စိတ်က ဘာလုပ်နေသလဲ…စဉ်းစားနေလား၊ တွေးနေလား၊ အေးချမ်းနေလား၊ ပူပန်နေလား။ တစ်ခုခုကို အဓိကထား ရှုမှတ် နေသလား.. ဘယ်လိုစိတ်မျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်တစ်ခုကြာ တကယ် ဖြစ်နေတယ်လို့ အတည် မယူပဲ..အဓိကမထားပဲ.. အဟုတ်မထင်ပဲ .. ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုသက်သက်ပဲ တကယ်ဖြစ်နေသည့် တူညီသည့် အမှန်တရား အပေါ်..
(တွေးနေခြင်း..မှတ်နေခြင်း.. ပူပန် နေခြင်း.. သာယာနေခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ခွဲခြားနေကြောင်း) အမျိုးမျိုး ခွဲခြားနေမှုပဲ ဖြစ်နေကြောင်း မမေ့ဖို့သာ အဓိကထားပါ။
3. What is the mind doing? Thinking? Being aware?
Don’t forget the truth of whatever kind of minds happening is unreal but just ever-new impermanent energies.
၄။ စိတ်က ဘယ်ရောက်နေလဲ.. အတွင်းမှာလား.. အပြင်ဘက် ရောက်နေလား။ အပေါ်ယံ သိနေတာလား… အသေအချာ သိလား…ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်- စိတ် တစ်ခုခု တော့ပေါ်လာပြီး ပျောက် သွားပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုစိတ်မျိုးပဲပေါ်ပေါ် အမှန်တကယ် မြဲနေ ဖြစ်နေတယ်လို့ မယူပဲ… တရစပ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှုပဲ တကယ်ဖြစ်နေခြင်း(အမှန်တရား) ကို လက်မခံနိုင်ခြင်းမှာ ဘာစိတ်.. ညာစိတ်. တွေးစိတ် စသည်ဖြင့် ခွဲခြားနေမှု (အထင်မှားမှု များ)သာ တရစပ်ဖြစ်နေကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံ နှလုံးသွင်းကြည့်ပါ။
Inside? Outside? Is the watching or observing mind properly aware or only superficially aware? A kind of mind will arise & pass away.
But accept that whatever kind of mind inside or outside or superficial or deep, is unreal but …only misunderstanding , being unable to accept only ever-new impermanent energies.
၅။ ” အကောင်းဖြစ်ဖြစ် အဆုံးဖြစ်ဖြစ် တွေ့ကြုံခံစားရသမျှကို အတည်မဟုတ်ပဲ.. ” တရစပ် ဖောက်ပြန် ပျက်စီးနေမှုသက်သက်သာ အတည်ဖြစ်နေခြင်း ” ဆိုတဲ့ တူညီသောအမှန်တရား ကို လက်ခံဖို့ကြိုးစားပါ။
ဟိုဟာမှ -ဒီဟာမှ- ကောင်းတာမှလိုချင်တယ် – မကောင်းတာဆို နည်းနည်းလေးမှ လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုရင် ဘုရားဟော အနိစ္စတရား (တရစပ်ဖောက်ပြန် ပျက်စီး နေမှုသက်သက်ပဲ တကယ်ဖြစ်နေခြင်း) အမှန်တရား အပေါ် နှလုံးသားထဲက ထဲထဲဝင်ဝင် မယုံကြည်နိုင်သေး … မသက်ဆင်းနိုင်သေးတာပါပဲ။
5. You have to accept and believe both good and bad experiences are the same characteristic of just ever-new impermanent energies.
You don’t want even the tiniest unpleasant experience? If so, this isaproof of you can’t accept yet the Buddha teachings that both good and bad experiences are unreal (not ORIGINAL truth) but the same nature of just ever-new impermanence AS REALITY.
၆ ။ တရားထိုင်နေစဉ် အတွေးတွေ အပေါ်စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ အတွေးတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အဓိကထား လေ့ကျင့်ခိုင်းနေတာ မဟုတ်ပါ။
ဘာစိတ်၊ ညာစိတ်၊ ဘာအတွေး၊ ညာအတွေး၊ နှစ်သက်စရာ၊ မုန်းစရာ အဖြစ် သတ်မှတ်နေမှု၊ အဟုတ်ထင်နေမှု၊ အထင်မှားနေမှုများပဲ (အ၀ိဇ္ဇာ)ပဲ တကယ် ဖြစ်နေတာ ကို လက်ခံနိုင်ဖို့သာ အဓိကထား လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။
6. Don’t feel disturbed by the thinking mind. You are not practicing to prevent thinking; but rather to practice to accept whatever kind of thinking arising is unreal but just misunderstanding that it is disturbed or likable or real.
Note: You should remember right thinking/taking/accepting (samma sankappa) is most essentially included in noble eightfold path to Enlightenment.
၇။ တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုတာ တစ်ခုခု..(သို့) သတ်မှတ်ချက်များကို အဟုတ် ထင်လျှက် တစ်ခုခု လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်။ ဘာမှမလုပ်ပဲ နေနေတာလည်းမဟုတ်။
တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ ထူးခြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ယောက် ဖြစ်ဖို့ …ထူးခြားတဲ့တစ်ခုခု တွေ့ကြုံ ခံစားဖို့ ကြိုးစားနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ…အမှန်တရားကို သတိထား-နှလုံးသွင်းနေမှုဖြင့် တစ်ခုခု တစ်ယောက်ယောက် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ သက်ရှိ သက်မဲ့ တွေကို အဟုတ်ထင်နေမှု (အ၀ိဇ္ဇာ) ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ကြိုးစားနေခြင်းပါ။
7. Meditating is neither doing something nor doing nothing, taking that something or everything is real.
Meditation is NOT trying to experience …
something special or to beaspecial one
but to abandon the idea of something or someone as reality
by the way of continuous right understanding the truth.
၈။ တရားအားထုတ်နေစဉ် တခါတရံ ရှုမှတ်လို့ ကောင်းနေသည်ဖြစ်စေ ရှုမှတ်လို့မကောင်းပဲ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေသည်ဖြစ်စေ.. ဒါတွေကို အဟုတ်မထင်ဘဲ.. အဓိက မထားပဲ… သစ္စာတရား (ဖောက်ပြန် ပျက်စီးမှုသက်သက်ပဲ တကယ်ဖြစ်နေခြင်း) အမှန်တရားကိုသာ မမေ့ဖို့ နှလုံးသွင်းယုံကြည်ဖို့ အဓိကထားပါ။
8. When meditating, both the mind and the body may be sometimes comfortable and sometimes may be getting tired.
Whatever situation-whether comfortable or tired is not important except paying attention to only the original truth, only ever-new impermanent nature is happening really in Sankhara loka, dependent conditioned field.
၉။ ဘယ်လိုသဘောထားနဲ့ တရားရှုမှတ်နေတာလဲ ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို သေချာစိစစ်ပါ။ တရစပ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှုသက်သက်ပဲ တကယ် ဖြစ်နေတာ လို့ ယုံကြည် လက်ခံနှလုံးသွင်းနေခြင်း (သို့) တွေ့ကြုံ ခံစားရသမျှအပေါ် အဟုတ် တကယ် ဖြစ် နေတယ် လို့ အတည် မယူပဲ စွန့်လွှတ်နေခြင်း (သို့) တွေ့ကြုံခံစားရသမျှအပေါ် အဟုတ်ထင်နေမှုသဘောပဲ တကယ် ဖြစ်နေတာ ဟူ၍ ယုံကြည် လက်ခံနှလုံးသွင်းနေခြင်း က ချမ်းသာအစစ် ကို သိရှိအောင် ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။
9. You have to double check to see what understanding/attitude you are meditating with.
Accepting that all fabrications are unreal but just ever-new impermanent energies enables you to abandon all stress permanently.
၁၀။ ထွက်သက်ဝင်သက်ဖြစ်စေ..၀မ်းဗိုက်ဖြစ်စေ..ဝေဒနာဖြစ်စေ..အရှုခံက ဒီလောက် အရေးမကြီးသေးပါ။ အရှုခံတွေကို လိုက်ရှုမှတ်နေတဲ့ စိတ်ကလေး ကလည်း ဒီလောက် အဓိက မဟုတ်သေးပါ။
” ရှုမှတ်စရာ တစ်ခုခုတွေ ပဲ …ဒါတွေကို လိုက်ရှုမှတ်နေတဲ့ စိတ်ကလေးပဲ ” ဟူ၍ ထင်ရ လောက်အောင် “တရစပ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု သက်သက်ပဲ တကယ်ဖြစ်နေခြင်း” ဟူသည့် တူညီသော အမှန်တရား ကို …မမေ့ဖို့ သာ အဓိကထားပါ။
10.One can observe the breathing or abdomen or sensation or feeling or whatever -etc; …. but the observing mind & attentive objects aren’t so important.
Continuous accepting that only ever-new impermanent nature which is made be misunderstood as the observing mind & attentive objects is really happening, is of real importance.
၁၁။ မဂ္ဂအလုပ်အပေါ် ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရား ရှိမှာသာလျှင်၊ လေ့ကျင့်အားထုတ်မှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါမယ်။
-လေ့ကျင့်ကြည့်မှသာလျှင် သစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ နှလုံး သွင်းမှု.. မှန်ကန်တဲ့သတိထားမှု ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။
-ထိုအခါ..မှန်ကန်တဲ့ တည်ကြည်မှု ငြိမ်သက်မှု ဖြစ်လာပါမယ်.
-မှန်ကန်တဲ့ တည်ကြည်မှု ဖြစ်လာမှသာ မှန်ကန်တဲ့ အယူ၊ မှန်ကန်တဲ့ နားလည်မှု (မှန်ကန်တဲ့အမြင်) ဖြစ်လာပါမယ်။
မှန်ကန်တဲ့ နားလည်မှု (သမ္မာဒိဋ္ဌိ) ဖြစ်မှသာ ယုံကြည်မှုအစစ်များ ဖြစ်ပေါ် ခိုင်မာလေတော့သည်။
11. Only when there is faith or confidence (saddha) upon the middle way, effort of practicing it will arise.
Only when there is effort(samma vayama), right rememberance & right taking (accepting) of the truth (samma sati & samma sankappa) will become continuous.
Only when samma sati & samma sankappa are continuous, right concentration in contemplating the truth (samma samadhi ) will become established.
Only when samma samadhi is established , right knowing or right understanding of the truth (samma ditthi) will arise. When you start right understanding the truth (pañña), real faith will grow stronger.
၁၂။ ကိလေသာဖြစ်မှာကို မကြောက်ပါနဲ့။ ကိလေသာကို ငါ့ကိလေသာ၊ သူ့ကိလေသာ စသည်ဖြင့် (တစ်ဦးဦးပိုင်အဖြစ်) အဟုတ်ထင်နေမှုကို အထင်မှားနေမှုကို ကြောက်ပါ။
စိတ်တွေ၊ ဝေဒနာတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ တစ်ခုခု ဆိုတာတွေကို အဟုတ်ထင်ပြီး ဖြစ်ချင်..ရချင်စိတ်တွေနဲ့ တရား အားမထုတ်ပါနဲ့ ။ တကယ့်ဥာဏ်အစစ်ဖြစ်ဖို့ အတွက် ဝေးနေပါလိမ့်မယ်။
12. Don’t fear the arising of defilement or diseases (kilesa). Just fear the defilement or diseases the assuming(taking) as mine, own of individual.
Don’t practice withamind that wants something or wants something to happen with the idea that something or someone is real. The result will only be that you are not practicing the insight meditation.
၁၃။ အာရုံတွေကို မငြိတွယ်ဖို့-မပုတ်ထုတ်ဖို့၊ ကိလေသာတွေကို အထင်မသေးဖို့ (သို့) လက်ခံမထားဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကြားနာ သိရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါထက် ကိလေသာတွေကို ငြိတွယ်နေတဲ့စိတ်ကိုရော.. မနှစ်မြို့တဲ့စိတ်ကိုရော အထင်မသေးတဲ့စိတ်ကိုရော…အဟုတ်မထင်ဘဲ.. (တကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ အတည်မယူပဲ) တရစပ် “ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှုသက်သက် ပဲ တကယ်ဖြစ်နေတာ” ကို … ချစ်ခင်တဲ့စိတ်..မုန်းတီးတဲ့စိတ်..အထင်သေးတဲ့စိတ်..အထက်မသေးစိတ်…ဘာစိတ်..ညာစိတ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ခွဲခြား သတ်မှတ်နေကြောင်း (အဟုတ်ထင်နေကြောင်း) လက်ခံနိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။
13. In previous time, we learned not to reject any object that comes to your attention & neither to condemn nor accept the defilement that arise in relation to the object.
But Don’t forget all these attitudes are also unreal but ….just ever-new impermanent nature. Remember that we are misunderstanding upon the same truth of ever-new impermanent nature as different kinds of objects.
၁၄။ တကယ့်မဂ္ဂင်တရားအလုပ်က မတူညီမှု ခြားနားမှုတွေကို တစ်ခုစီ တစ်ခုစီ လိုက် မှတ်နေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါ။
တကယ့်မဂ္ဂင်တရားအလုပ်က ဘာတွေ ညာတွေ ဆိုတဲ့ တစ်ခုခုတွေ.. တစ်ယောက်ယောက်တွေ ၊ ဘယ်လိုမှ..ညာလိုမှ ဆိုတဲ့ ကွဲပြားမှုတွေဟာ တကယ်ရှိနေတယ်.. တကယ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အထင်မှား ကို သစ္စာတရား နှလုံးသွင်းမှုဖြင့် စွန့်လွှတ်နေခြင်းပါ။
14. Insight Meditation is not just the noting upon the differences of nature in each by each.
Insight Meditation is the abandoning the idea of differences of something/everything in nature by not-forgetting the same original truth.
၁၅ ။ တရားအလုပ်ဆိုတာ တည်ငြိမ်နေတဲ့ တစ်ခုခု (သို့) လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခု ကို အဟုတ်ထင်ပြီး သတိထားနေရုံ မှတ်နေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါ။
သတိထားခံနေရတဲ့ အရှုခံ အာရုံတစ်ခုခု ကိုရော သတိထားနေတဲ့စိတ် ကိုရော အချိန်တစ်ခုကြာ တကယ်မြဲနေ၊ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ အယူကို နှလုံးသွင်းမှန်မှုဖြင့် စွန့်လွှတ်နေခြင်းက ကိလေသာသတ်တဲ့ တရားအလုပ်ပါ။
15. Insight meditation is not just to note upon something/movement.
Meditation is to abandon the taking observing mind & objects of attention as reality by remembering the original truth, creations of misunderstanding which is just ever-new impermanent energies too.
၁၆။ . ရှုနေတဲ့ အရှုခံအာရုံ တစ်ခုခုဟာ မိမိအတွက် အဆင်ပြေကောင်း ပြေနေမည်ဖြစ်သော်လည်း တရားအားထုတ်ရာမှာ အများထက် သာလွန် နေတယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ တရားအားထုတ်ရာမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ သင်္ခါရတရားအားလုံးရဲ့ တူညီသော သဘာဝ လက္ခာဏာ အနိစ္စ သက်သက်သာ ဖြစ်နေခြင်း (တရစပ် အသစ်အသစ် အစားထိုး ပျက်စီးနေမှုသက်သက်ပဲ တကယ်ဖြစ်နေတယ်) ဆိုတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာ အမှန် တရားကို မေ့သွားတာပါပဲ။
16. If you think the object you’re observing is special for Vipassana, in spite of good for you, your meditation is not Vipassana meditation as you forget the same truth of all conditioned objects are unreal but … just ever-new impermanent energies which is the key for insight meditation.
17. Don’t focus too hard, don’t control. Neither force nor restrict whatever you can feel good or bad. Just try to act with action only , to do with doing only without representing something or someone.
၁၈ ။ တစ်ခုခုကို အဓိကထားပြီး ပြုလုပ်ချင်မနေနဲ့။ မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှ၊ တွေ့ကြုံ သမျှ တစ်ခုခုတွေအပေါ် အဟုတ်ထင်ပြီး စိတ်ကုန်မနေပါနဲ့။ လုပ်စရာတစ်ခုခုကို-လုပ်ချင်နေတဲ့စိတ်ကို ” အဟုတ်ထင်မှု၊ အတည်ယူနေမှု ပဲ ” တကယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအမှန်တရား(သစ္စာတရား)ကိုသာ မမေ့ဖို့-သတိထားဖို့ အဓိကထား ကြိုးစားကြည့်ပါ။
18. Don’t try to create anything, and don’t reject what is happening being taken as reality. Just be mindful/not to forget only the Original Truth of misunderstanding that something to be created or rejected and someone who is creating or rejecting is real.
၁၉။ တစ်ခုခု ဖြစ်ချင်နေရင် လောဘ။ တစ်ခုခုပျောက်ချင်နေရင် ဒေါသ။
တစ်ခုခုကို တကယ် ရှိနေတယ်၊ တကယ်ဟုတ်တယ်-တကယ်ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်ရပ်စဲ သွားတယ် လို့ ယူရင် မောဟ ( အ၀ိဇ္ဇာ)။
19.Trying to create something is greed. Rejecting what is happening is aversion. Taking/Assuming that something is happening or something has stopped is delusion. Taking if something, someone as reality, is misunderstanding upon the Original Truth.
၂၀။ တကယ့် တရားအလုပ် က မြင်သမျှ..ကြားသမျှ.. တွေ့ကြုံသမျှ.. ..ကောင်းကောင်း..ဆိုးဆိုး..ခံစားချက်များကို အတည်မယူပဲ… အဟုတ်မထင်ဘဲ … တရစပ် (အသစ်အသစ်ဖြစ်ကာ) ဖောက်ပြန် ပျက်စီးမှု သက်သက်ပဲ တကယ်ဖြစ်နေခြင်း ဟူ၍ ယုံကြည်လက်ခံ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင် နေခြင်း ဖြစ်လေသည်။
20. Meditating is accepting/believing whatever happens —whether pleasant or unpleasant—as unreality but Just Ever-new Impermanent nature.
၂၁။ ပစ္စုပ္ပါန်တည့်တည့် ရှုမှတ်နေမှုပဲဖြစ်ဖြစ်…အတိတ်ကို ပြန်တွေးနေမှုပဲဖြစ်ဖြစ် အနာဂတ်ကို ကြံစည်စိတ်ကူးနေမှုပဲဖြစ်ဖြစ်…ပေါ်သမျှ စိတ်တွေ ခံစားချက် များအပေါ် အဓိကမထားပဲ… အတည်မယူပဲ…အဟုတ်မထင်ဘဲ….. တရစပ် (အသစ်အသစ်ဖြစ်ကာ) ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု သက်သက် ပဲ တကယ် ဖြစ်နေသည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံ နှလုံးသွင်းကြည့်ပါ။
21. Just pay attention to accepting whatever in the present moment, thoughts about the past & the future are unreal but just ever-new impermanent nature.
၂၂။ တစ်ခုခုကို အဓိကထားပြီး ဘာလို့ ဒီလောက် စူးစိုက် ရှုမှတ်နေရတာလဲ။ တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက်အဖြစ်ကို အဟုတ်ထင်ပြီး တစ်ခုခု ဖြစ်ချင်လို့.. လိုချင်လို့..ပျောက်ချင်လို့ ဆိုတဲ့ သဘောထား တွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒါဆိုရင် ဥာဏ်တရားအလုပ် (၀ိပဿနာ) မဟုတ်သေးဘူး။
22. Why do you focus so hard when you meditate? Do you want something ? Do you want something to happen?
….with the idea of something, someone as reality?
This is not insight meditation if one of these attitudes with the idea of something, someone as reality, is present.
၂၃။ တရစပ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှု သက်သက်ပဲ တကယ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို မမေ့ မလျော့ သတိရ နှလုံးသွင်းနေတဲ့စိတ်ဟာ ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို အဟုတ် မထင် တော့တဲ့ အတွက် လွတ်လပ်ပေါ့ပါး အေးချမ်းနေတယ်။
23. The meditating mind will be relaxed & at peace because it won’t take something/everything or someone/everyone as reality …. but just ever-new impermanent nature.
၂၄။ နှလုံးသွင်းမှန်မှု ဖြစ်နေပါက သိစိတ် (အသိဥာဏ်) တွင် မြင်မှု၊ ကြားမှု၊ ခံစားရမှုတို့အပေါ် တစ်ခုခုအဖြစ် စိတ်ညစ်စရာ.. သာယာစရာ ဟူ၍ မယူတော့ပေ။ အဟုတ်မထင်တော့ပေ။
24. The observing mind won’t automatically have the idea of likes, dislikes or anxiety only when right understanding appears.
၂၅။ တစ်ခုခု၊ တစ်ဦးဦး၊ တစ်ယောက်ယောက်၊ ငါ၊ အတ္တ၊ အသက်၊ လိပ်ပြာ၊ အတက်၊ အကျ၊ အပိန်၊ အဖောင်း၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ဆိုတာတွေဟာ တကယ်မဟုတ်ဘဲ …
ဒီ တစ်ခုခု၊ တစ်ဦးဦး၊ တစ်ယောက်ယောက်၊ ငါ၊ အတ္တ၊ အသက်၊ လိပ်ပြာ၊ အတက်၊ အကျ၊ အပိန်၊ အဖောင်း၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ဆိုတာတွေကို အချိန်တစ်ခုကြာ တကယ်ရှိနေတယ် ဆိုပြီး အတည်ယူနေမှု၊ အဓိကထားနေမှု၊ အဟုတ်ထင်နေမှု၊ အထင်မှားနေမှုများပဲ တကယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
25.In original truth, there is no “I”, “someone”, “something”, “self”, “soul” , “entity”, “rising”, or “falling” but there is only actions of misunderstanding that there is really “I”, “someone”, “something”, “self”, “soul” , “entity”, “rising”, or “falling” -etc.
26. Every meditator can understand that something/someone which has arised will have to pass away inacertain time.
We always talk about impermanence of something/someone.
But nearly every meditator can’t understand the impermanent nature only
without the idea of something/someone.
So also misunderstanding upon ever-new impermanent energies as someone/everyone or something/everything.
၂၇။ တစ်ခုခုဖြစ် တစ်ခုခုပျက် ၊ ပူတာလေးပေါ် ပူတာလေးပျောက်၊ အတွေးစိတ်လေးဖြစ် အတွေးစိတ်လေးပျက် ဆိုတာတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်နေကျပါ။
“တရစပ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေ ပဲ ဖြစ်ပြီး၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေပဲ တရစပ် ကွယ်ပျောက်နေခြင်း” အမှန်တရားကိုသာ မမေ့ဖို့ နှလုံးသွင်းနေဖို့ အဓိကထားကြည့်ပါ။
တရစပ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေပဲ တကယ်ဖြစ်နေတာ ကို “ဘာအဖြစ် ညာအဖြစ်၊ ဝေဒနာအဖြစ်၊ နာတာအဖြစ်၊ ကျင်တာအဖြစ် အတွေးစိတ်အဖြစ်၊ သောကအဖြစ်၊ တစ်ခုခုအဖြစ်၊ အထင်မှားနေမှု အ၀ိဇ္ဇာပဲ တကယ် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကိုသာ မမေ့ဖို့ နှလုံးသွင်းနေဖို့ အဓိကထားကြည့်ပါ။
27. Try to accept only ever-new impermanent nature is arising & only ever-new impermanent nature is passing away.
Misunderstanding upon ever-new impermanent nature as someone, something, or reality is happening eventually & impersonally …, being unable to understand that only ever-new impermanent nature is happening really in Sankhara loka, dependent conditioned energies field.
၂၈။ မမေ့မလျော့ အမြဲ သတိထားရမည့် သစ္စာထိုက်သော အမှန်တရား(သင်္ခါရတရား)ဟူသည်
ဘာသာလူမျိုးမရွေး၊ နေရာဒေသ-အချိန်မရွေး၊ မှန်ကန်နေရပါမည်။
သတ်မှတ်ထားသော သမုတိသစ္စာ အမှန်တရားသည် အချိန်ကာလလေးတစ်ခုအတွင်း နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှသာ မှန်ကန်ပါသည်။
အချိန်-နေရာ-ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနေပါက သစ္စာထိုက်သော အမှန်တရားမဟုတ်သေးပေ။
ပူမှုလေးသည် အေးလာသောအခါ သစ္စာမထိုက်တော့။
တင်းမှု လေးသည် လျော့သွားသောအခါ မမှန်ကန်တော့။
ပိန်မှုလေးသည် ဖောင်းလာသောအခါ တကယ်မဟုတ်တော့။
နာကျင်မှုသည် သက်သာလာသောအခါ တကယ်မဟုတ်တော့။
မေတ္တာထားမှုသည် ဒေါသထွက်လာသောအခါ တကယ်မဟုတ်တော့။
ဒေါသစိတ် သည် ကရုဏာစိတ် ဖြစ်လာသောအခါ တကယ်မဟုတ်တော့။
ယုံကြည်မှု သည် သံသယ ဖြစ်လာသောအခါ တကယ်မဟုတ်တော့။
ရှင်သန်မှု သည် သေဆုံးသွားသောအခါ တကယ်မဟုတ်တော့။
ငြိတွယ်မှု သည် စွန့်လွှတ်ချင် လာသောအခါ တကယ်မဟုတ်တော့။
ဆင်းရဲမှု လည်း ချမ်းသာ လာသောအခါ သစ္စာမထိုက်တော့။
စေတနာလေး သည် ၀န်တိုစိတ် ဖြစ်လာသောအခါ မမှန်ကန်တော့။
– သစ္စာမထိုက်သော သတ်မှတ်ချက်များကို အမှန်တရား သစ္စာတရား အဖြစ် အထင်မှားနေမှု အဟုတ်ထင်နေမှု -အ၀ိဇ္ဇာ သည် ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ အချိန်မရွေး၊ နေရဒေသမရွေး (အသစ်အသစ်အစားထိုးကာ) မပြောင်းမလဲ မဖောက်ပြန်ပဲ အမြဲ နေသော တူညီသည့် အမှန်တရားဖြစ်လေသည်။ သမုဒယသစ္စာအဖြစ် သစ္စာလေးပါး တွင် ပါဝင်နေလေသည်။
28.Original truth is true in any race, any religion, anywhere, anytime, anyone and any situation perpetually.
Created truth is just for labeling and will be true only in considering relativity and only foracertain period.
Hotness becomes untrue when coldness appears.
Coldness becomes untrue when hotness appears.
Rising becomes untrue when falling appears.
Inhaling becomes untrue when exhaling appears.
Repulsion becomes untrue when attraction appears.
Kindness is not true when hatred appears.
Dislike is not true when like appears.
Calmness becomes untrue when agitation appears.
Agitation becomes untrue when calmness appears.
Being (life) is not true when death appears.
Tightness is not true when looseness appears.
Pain is not true when pleasure appears.
Noting becomes untrue when heedlessness appears.
Good becomes untrue when bad appears.
Attachment becomes untrue when abandon appears.
Faith becomes untrue when doubt appears.
If you take your knowing / perception as truth, you can’t accept the truth as truth.
Our perceptions are not original truth but just the created truth or relative truth.
Misunderstanding the above dualities as reality will never change in any race, any religion, anywhere, anytime, anyone and any situation. Changing nature will never change.
Misunderstanding that someone, something, I, mine, you, yours, individual ,soul or entity -etc, is real, is always true in any race, any religion, anywhere, anytime, anyone and any situation. It is also one of the four original truths.
၂၉။ အတ္တ (သို့) ငါ၊ သူတပါး၊ တစ်ခုခု၊ တစ်ဦးဦး၊ တစ်ယောက်ယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါတွေ ကို ရှောင်ကွင်းဖို့ ပစ်ပယ်ဖို့ မလိုအပ်ပါ။
အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် အတ္တ (သို့) ငါ ၊သူတပါး၊ တစ်ခုခု၊ တစ်ဦးဦး တစ်ယောက်ယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ ဆိုတာတွေဟာ တကယ်မဟုတ်၊ တကယ်ဖြစ်မနေလို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ငါ ၊သူတပါး၊ တစ်ခုခု၊ တစ်ဦးဦး တစ်ယောက်ယောက်၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါတွေ ကို အဟုတ်ထင်မှု – အရှိ၊အဟုတ်၊အတည်ဖြစ်တယ် လို့ ယူမှု (အယူဝါဒ) ကိုတော့ စွန့်လွှတ်ရပါမယ်။
ဒီအယူဟာ ဘာသာလူမျိုးမရွေး၊ အချိန်မရွေး၊ သတ္တ၀ါမရွေး၊ စိတ်သန္တာန်မှာ တူညီစွာ အမြဲ မပြတ် တရစပ် ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်
29. There is no need to abandon “ego” or “self” because there is no “ego” or “self” as reality.
But need to abandon the idea of “ego” or “self”.
Just abandon the taking the “ego” as reality or actions of assuming “self” as reality because the idea of “ego” or “self” is perpetually in the mind of everyone, every religion, every race, every where in anytime.
၃၀။ အေးတဲ့သဘောကို အတည်ယူရင် ပူတဲ့သဘောကိုလည်း အတည်ယူရပါမယ်
ချီးမွမ်းသံကို အဟုတ်ထင်လျှင် ကဲ့ရဲ့သံကိုလည်း အဟုတ်ထင်ရပေမည်..
သာယာမှုကို အဟုတ်ထင်ရင် နာကျင်မှုကိုလည်း အဟုတ်ထင်ရပေမည်..
သုခ ဝေဒနာကို အဟုတ်ထင်လျှင်ဒုက္ခဝေဒနာကို အဟုတ်ထင်ရပေမည်..
ဖောင်းမှုကို အဟုတ်ထင်လျှင် ပိန်မှုကိုလည်း အဟုတ်ထင်ရပေမည်..
ပိုင်ဆိုင်မှုကို အဟုတ်ထင်လျှင် ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်း အဟုတ်ထင်ကာ ကြေကွဲရပေမည်။
ငါ (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ အဖြစ် (ရှင်သန်ခြင်း)ကို အဟုတ်ထင်လျှင် ငါ (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ သေဆုံးခြင်းကို အဟုတ်ထင်လျှက်
ထိတ်လန့်ပူဆွေးရမည် မှာ မဖောက်မပြန် အမြဲ မှန်ကန်နေမည့် အမှန်တရားဖြစ်လေသည်
30. If you take coldness as reality,
၃၁။ ပူရင် ပူတယ် လို့ မှတ် နေမှုအစား
လျင်မြန်လွန်းစွာ မပြတ်တရစပ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု သဘောများကို
ပူတာလေး ဟု အထင်မှားနေကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံ နှလုံးသွင်းကြည့်ပါ။
– ပူတာလေးတစ်ခု ဖြစ် လာပြီး ပူတာလေးတစ်ခု ပျက်သွားတာဟု သိနေမှုအစား
မပြတ် တရစပ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှုသဘောများကို ပူတာလေးတစ်ခု ဖြစ်လာပြီး-ပူတာလေးတစ်ခုကပဲ ပျက်သွားတာဟု
အထင်မှားနေကြောင်း လက်ခံ နှလုံးသွင်းကြည့်ပါ။
– ဝေဒနာလေးတစ်ခု ပေါ်လာပြီး – ဝေဒနာလေးတစ်ခု ပျောက်သွားတာဟု ရှုမှတ်နေမှုအစား
ဝေဒနာတွေကို အချိန်တစ်ခုကြာ ရှိနေတယ်လို့ အထင်မှားအောင်
အ၀ိဇ္ဇာ၊ သင်္ခါရ တို့၏ ပြုလုပ်မှုများပဲ တကယ်ဖြစ်ပြီး တကယ်ပျက်စီးနေတာ လို့ လက်ခံ နှလုံးသွင်းကြည့်ပါ။
31.Rather than noting pain as “pain, pain”, please try to take that ever-new impermanent energies are being misunderstood as pain.
Rather than takingapain is arising & passing away”, please try to accept that ever-new impermanent energies are being deceived as ifapain is existing foracertain period and then it passes away.
Rather than taking pain as “just feeling arising & passing away”, please try to accept the truth of actions of delusion which create as if good or bad feelings is existing foracertain period and then it is gone.
၃၂။ ကျွန်ုပ်တို့ သတိထားမိနေတဲ့ ထွက်လေ-၀င်လေ (သို့) ပိန်မှု ဖောင်းမှု (သို့) အတွေးစိတ်တွေ ဟာ ……တခါတရံ အလွန် ထင်ရှားပြီး…….
တခါတရံ သိမ်မွေ့လွန်းနေပါမယ်။ …..တခါတရံ ရှည်လျားလွန်းပြီး… တခါတရံ တိုတောင်းတယ်၊ မထင်ရှားဘူး လို့ ထင်ရပါတယ်…
ဘယ်လိုပဲ ထင်ရ ထင်ရ ဒါတွေကို တကယ့်ကို ထူးခြားတာတွေပဲ ဆိုပြီး အတည်မယူ..အဓိကမထားဘဲ…
ဒါတွေကို အတည်ဖြစ်တယ် (အချိန်တစ်ခုကြာ တကယ်ရှိနေတယ်)လို့ အထင်မှားနေမှု..အဟုတ်ထင်နေမှု …အတည်ယူနေမှု..ပဲ တကယ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကိုသာ မမေ့ဖို့ အဓိကထားပါ။
33. Our “breathing in & out”, or “rising & falling” , or “thinking & thoughts”
may be….. sometimes long…, sometimes short, …
sometimes clear or opaque,….sometimes deep or shallow…
No matter whatever… but remember it is notaspecial one;
It is just actions of misunderstanding which creates as if it may beareal special one & it is lasting foracertain period.
၃၃။ အတိတ်၊ အနာဂတ် ဆိုတာ…တကယ်တော့ ပစ္စုပ္ပါန်ပေါ်ပေါ်လာနေတဲ့ အတွေးတွေ၊ စဉ်းစားမှုတွေကြောင့်သာ တကယ်ရှိနေတယ်လို့ ထင်နေရခြင်းပါ။ ပစ္စုပ္ပါန် စက္ကန့်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်းမှာ အတိတ်ပဲ၊ အနာဂတ်ပဲ အတွေးစိတ်တွေပဲ၊ သောကစိတ်ပဲဘာပဲ-ညာပဲ-အကောင်းပဲ-အဆိုးပဲ စသည်ဖြင့်
သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ်နေမှု..အထင်မှားမှု(အ၀ိဇ္ဇာများ) သာ
မပြတ်တရစပ် ဖြစ်နေကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံနှလုံးသွင်းနေပါ။
33. The Past & Future events seem to be real due to the thoughts or thinking which are arising & passing away in the Present moment, don’t they?
Don’t take your thinking or perceptions as reality but just actions of misunderstanding , being unable to understand the original truth.
၃၄။ သုခဝေဒနာ အဖြစ် ကို အတည်ယူလျှင်
သုခဝေဒနာရဲ့ အပျက် ကို ကြေကွဲရပေမည်..
ဒုက္ခဝေဒနာ အဖြစ် ကို အတည်ယူလျှင်
ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ အပျက် ကို သာယာနေပေမည်..
ဒုက္ခဝေဒနာ ပျက်စီးသွားမှ အနိစ္စ လုပ်လျှင်
မပျက်စီးခင် နိစ္စလုပ်ကာ အဟုတ်ထင်- အံကြိတ်နေရပေမည်..
သုခဝေဒနာ ပျက်စီးသွားမှ အနိစ္စ ထင်လျှင်
သုခဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်နေခိုက် နိစ္စ လုပ်ကာ အဟုတ်ထင်နေသည်
တစ်စုံတစ်ခု၌ အာရုံစူးစိုက်ထားနိုင်ခြင်းကို အဟုတ်ထင်လျှင်
တစ်စုံတစ်ခု၌ အာရုံစူးစိုက်မထားနိုင်သောအခါ မကျေမနပ်ဖြစ်ပေမည်.
ချစ်ခင်သူ ဆုံးရှုံးသွားမှ အနိစ္စ ဆိုလျှင်
ချစ်ခင်သူ နှင့် အတူရှိခိုက် နိစ္စ လုပ်နေသည်
ပျက်စီးသွားမှ အနိစ္စ လုပ်လျှင် မပျက်စီးခင် နိစ္စ လုပ်နေသည်..
ပျက်စီးသွားမှ ဒုက္ခ ထင်လျှင် မပျက်စီးခင် သုခ လုပ်နေသည်..
ငါ့အလိုအတိုင်းမဖြစ်မှ အစိုးမရ အနတ္တ လုပ်လျှင်
စိတ်တိုင်းကျဖြစ်နေလျှင် အတ္တ ဖြစ်နေပေသည်
– တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပတ်သက်နေသော ဖြစ်ပျက် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တသည် –
မိမိ နှစ်သက်သော တစ်ခုခု ၏ အဖြစ် တွင် ၀မ်းသာ၍
မိမိ နှစ်သက်သော တစ်ခုခု၏ အပျက် တွင် ၀မ်းနည်းလေသည်။
မိမိ မနှစ်သက်သော တစ်ခုခု ၏ အဖြစ် တွင် ၀မ်းနည်း၍
မိမိ မနှစ်သက်သော တစ်ခုခု၏ အပျက် တွင် ၀မ်းသာလေသည်။
– တစ်ခုခု တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပတ်သက်နေသော ဖြစ်ပျက် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တသည် တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက် ကို အဟုတ်ထင်မှု သဿတဒိဋ္ဌိ တန်းလန်းကြီးနဲ့ ဖြစ်သဖြင့် ဖြစ်ပျက် အနိစ္စတွင် ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်း ရောထွေးပါဝင်လျှက် ကိလေသာ ကြားထိုးခံနေလေသည်။
34. If one take the arising of pleasant feeling as reality, he will surely be distressful upon the passing away of it.
If one take the one take the arising of unpleasant feeling as reality, he will surely crave upon the passing away of it.
If you take the impermanence of unpleasant feeling as truth only when it passes away, you will surely suffer until it is gone.
If you take the impermanence of pleasant feeling as truth
only when it passes away, you will surely crave until it is gone.
If you take the unsatisfactoriness – suffering as truth
only when good passes away or bad arises,
you will surely take satisfactoriness – pleasure as truth
until good passes away or bad arises.
If one take “non-self” as truth only when things turn out the way you don’t want them to happen, you will take “self” as truth when things turn out way you want them to happen.
If our mindfulness of Annica, Dukkha, Anatta is concerning with the idea of something or someone or entity etc, our understanding is automatically concerning with likes or dislikes upon them, taking them as reality foracertain time.
According to taking pleasant one & unpleasant one as reality,
Likes follow automatically the arising of pleasant one.
Dislikes follow automatically the passing away of pleasant one.
Dislikes follow automatically the arising of unpleasant one.
Likes follow automatically the passing away of unpleasant one.
၃၅။ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်တယ်ဆိုတာ အများနားလည်အောင် တော့ အရှိ ကို အရှိ အတိုင်း မြင်အောင် ကြည့်တာလို့ ပြောရပါတယ်။
တကယ့် ဒုက္ခသစ္စာ အမှန်တရားကို နားမလည်နိုင်ခြင်းမှာ..တစ်ခုခု၊ တစ်ယောက်ယောက် အဖြစ်၊ နာတဲ့ ကျင်တဲ့အဖြစ်၊ ပူတဲ့ အေးတဲ့အဖြစ်၊ ပိန်တဲ့ဖောင်းတဲ့အဖြစ် တွေကို တကယ့်အရှိ တကယ့်အဖြစ် ဆိုပြီး
အထင်မှားအောင် ပြုလုပ်နေမှု အသစ်အသစ် များ ပဲ မပြတ်တရစပ် ရှိနေပါတယ် …..
…မရှိတာ ကို အရှိထင်အောင် ပြုလုပ်နေမှု
…မမှန်တာ ကို အမှန်ထင်အောင် ပြုလုပ်နေမှု
…မဟုတ်တာကို အဟုတ်ထင်အောင် ပြုလုပ်နေမှု အသစ်အသစ်များ ပဲ တကယ်ရှိနေ…ဖြစ်နေပါတယ်။
35. We can tell insight meditation is seeing things as they are.
In reality, matter or mind that we can perceive is not real yet ….but ONLY actions of MISUNDERSTANDING upon ever-new impermanent energies AS things, being, someone, individual, soul, entity, body, matter, thinking, feeling, emotion, or an existence foracertain moment our perception can detect.
ONLY Actions of misunderstanding upon what is unreal as reality….
ONLY Actions of delusion upon what is not being as being…
ONLY Action of deception upon what is not existing as existence….
ONLY Action of deception upon what is false as truth….
or Samudaya Sacca is really being
As Ever-New Impermanent Nature.
၃၆။ လောကီတွင် သူတပါးအပေါ် ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ညာလိုဖြစ်တယ် ဒီလိုမှ ဟိုလိုမှ …ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ဝေဖန် အပြစ်တင်နေတတ်သော စိတ်အကျင့်သည်လည်းကောင်း၊
ဘာမှ ညာမှ ခွဲခြားနေမှု၊ ဂျီး(ဆင်ခြေ)များနေမှု သည်လည်းကောင်း တရားအားထုတ်မှုတွင် ကြီးစွာ အနှောင့်အယှက်ပေးလေတော့သည်။
ထိုသဘောထားတို့သည် သင်္ခါရတရားတို့၏ တရစပ် အသစ်အသစ် အစားထိုး ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှုသက်သက်သာ တကယ်ဖြစ်နေသည် ……ဟူသည့် တူညီသော ဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားကို လက်ခံဖို့ မမေ့ဖို့ အဓိကမထားပဲ ……..ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးပဲ၊ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးပဲ၊ ဟိုလိုပဲ၊ ဒီလိုပဲ ဟူ၍ ……..ခွဲခြားမှု ဝေဖန်မှု တောင့်တမှု ကြောင့်ကြမှု တို့ နှင့် ……..ချာလည်လည်နေတော့သည်။
36. In the worldly cases, the attitude of deep criticism and complaint …
good or bad & right or wrong ……about something, someone, or individual etc, will surely be the greatest hinderance for being able to practice insight meditation successfully.
In meditation practice, this attitude will surely stress only criticism and identifying good or bad & right or wrong about feeling, sensation, emotion, thinking, perceptions, mind or body etc, without emphasizing the mindfulness upon …the same original truth that all these are unreal but just ever-new impermanent nature which is the key for practicing insight meditation.
၃၇ ။ တကယ့် အမှန်တရားတွင် (နှလုံးသွင်းရမည့် သစ္စာတရားဟူသည်)..
….ပူမှု-အေးမှုတွေ ဖြစ်နေတာမဟုတ် –
ပူမှုအေးမှုတွေကို အဟုတ်ထင်မှုတွေပဲ တကယ် ဖြစ်နေတာပါ။
….သုခ-ဒုက္ခတွေ ဖြစ်နေတာမဟုတ် – သုခ-ဒုက္ခတွေကို
အဟုတ်ထင်မှုတွေပဲ တကယ် ဖြစ်နေတာပါ။
….သောကတွေ-နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်နေတာမဟုတ် –
သောကတွေ-နာကျင်မှုတွေကို အဟုတ်ထင်အောင် (အ၀ိဇ္ဇာ-သင်္ခါရ) ပြုလုပ်မှုတွေပဲ တကယ် ဖြစ်နေတာပါ။
….”ငါ” ဖြစ်နေတာ မဟုတ် – “တစ်ငါငါ ပြုလုပ်မှုတွေပဲ” တကယ် ဖြစ်နေတာပါ။
37. In original reality,
“Coldness & hotness” or “pain or pleasure” or
“rising & falling” or “likes & dislikes” -etc; are not real
but actions of misunderstanding which creates as if they are real.
and so is “self”.
“You & me” or “they & us” “soul & individual & entity” -etc;
are not real but actions of delusion which creates as if they are real.
၃၈။ ပူမှု-အေးမှုတွေ၊ သုခ-ဒုက္ခတွေ ကို ငြင်းပယ်ရမှာမဟုတ်သလို၊ ငြိတွယ်ရမှာလည်းမဟုတ်၊
ပျော်ရွှင်မှုတွေ – စိတ်ညစ်မှုတွေ ကို ပယ်ရမှာမဟုတ်သလို၊ တွယ်နေရမှာလည်းမဟုတ်ပါ။
ဒါတွေကို တစ်ခုခု-တစ်ယောက်ယောက်ကို ကိုယ်စားမပြုကြောင်း သိရှိလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက် အသုံးချရုံသက်သက် အသုံးချဖို့ပါ။
နှလုံးသွင်းမှန်မှု (၀ိပဿနာဥာဏ်)ဖြစ်ပေါ်ရေး သုံးရုံသက်သက် သုံးတတ်ဖို့ပါ။
38. No need to reject nor attach the coldness or hotness, and pain or pleasure.
No need to like nor dislike upon the mind or thinking or feeling or sensation and worries or happiness but just use them for practicing in order to appear right understanding leading to real enlightenment.
၃၉။ အချိန်တစ်ခုကြာ ဝေဒနာတွေ-စိတ်တွေ-ခံစားချက်တွေ-အတွေးတွေ ..
ရှိနေတယ်လို့ အထင်မှားအောင် အ၀ိဇ္ဇာ ရဲ့ လှည့်စားပြုလုပ်မှုတွေ ပဲ ဖြစ်ပြီး..ပျက်နေတယ် ဆိုတာကို ယုံကြည် လက်ခံ နှလုံးသွင်းကြည့်ပါ။
ဘာဖြစ် မလဲတော့ မမေးပါနဲ့။
ဘာဖြစ် ညာဖြစ် ဆိုတဲ့ ပညတ်ဖြစ် ပညတ်ပျက် များအပေါ် အဟုတ်ထင်ကာ ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ ကိလေသာများ-အပူများ -အစွဲများ
လျော့လျော့လာပြီး- ငါစွဲ-သက္ကာယဒိဋ္ဌိ အယူလေး မဖြစ်တော့ရုံပါဘဲ။
39. Please try to accept only actions of misunderstanding which creates continuously & endlessly as ifafeeling,apain,asensation, an emotion orathought is existing foracertain period and then it is gone.
Don’t doubt what will happen if one can accept like this;
The result is just disappearing the stress and worries about what is happening or what will happen because of taking them as reality.
၄၀။ ရုပ်တွေ၊ ဝေဒနာတွေ၊ စိတ်တွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးတွေ ဆိုတာ ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားတာ ကြောင့် အတည်ယူလို့မရပါ။
တကယ့် အရှိတရားမဟုတ်ပါ။ တကယ့်အမှန်အရှိ မဟုတ်ပါ။
တကယ့်တရားခံအစစ်က ရုပ်တွေ၊ ဝေဒနာတွေ၊ စိတ်တွေ မဟုတ်ဘဲ….
ရုပ်တွေ၊ ဝေဒနာတွေ၊ စိတ်တွေကို အဟုတ်ထင်အောင် အတည်ယူအောင်-
အ၀ိဇ္ဇာ-သင်္ခါရ- တို့၏ မပြတ်တရစပ် လှည်းစား ပြုလုပ်မှုများပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
40. Because seeing, hearing, smelling, feeling, sensation, thinking, thoughts,body, mind -etc; that we can perceive will have to pass away inacertain time after arising, we can’t take them as reality or original truth.
But we note & identify them as reality & attentive objects.
Real root of all stress or problem is not the seeing, hearing, smelling, sensation, thinking, thoughts,body, mind -etc; that we can perceive
but action of misunderstanding which creates as if they are existing foracertain period.
၄၁ ။ သုခ ဝေဒနာ-ဒုက္ခဝေဒနာ အဖြစ် အတည်ယူလိုက်ကတည်းက
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် – ကိလေသာဝဋ်-ကမ္မ၀ဋ် ဒုက္ခစက် လည်ပါပြီ။
သုခဝေဒနာ အဖြစ် အတည်ယူလိုက်ကတည်းက သာယာမှု လာ၍ သုခဝေဒနာအပျက်တွင် မကျေနပ်မှု လာပါသည်။
ဒုက္ခဝေဒနာ အဖြစ် အဟုတ်ထင်လိုက်ကတည်းက ဒေါသ လာ၍ ဒုက္ခဝေဒနာအပျက်တွင် သာယာမှု လာပါသည်။
41. Dependent on misunderstanding, taking the good or bad feeling as reality create the vicious cycle of stress (conditioned Arising-Paticca-Samuppada) generate continuously & endlessly.
Dependent on taking the good feeling as reality, craving arises and then dislike arises because of its disappearing.
Dependent on taking the bad feeling as reality, aversion arises and likes arises because of its passing away.
၄၂။ …ပူတယ် ထင်မိ ရ လောက်အောင်
တရစပ်ဖောက်ပြန် ပျက်စီးနေမှုကို ငါ ပူတယ် လို့ ထင်မိနေတာ။
– …တင်းကြပ်နေတယ်လို့ ထင်မိရ လောက်အောင်
တရစပ်ဖောက်ပြန် ပျက်စီးနေမှု ကို ငါ တင်းကြပ်နေတယ် လို့ ထင်မိနေတာ။.
– …အတွေးတစ်ခုလို ထင်မိရ လောက်အောင်
တရစပ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု ကို ငါ ကြံတွေးနေတယ် ထင်နေတာ။
– …ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် လို့ ထင်မိရ လောက်အောင်
တရစပ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု ကို
ငါကောင်းတာ ဖြစ်တယ်..ငါ့ဆိုးတာ ဖြစ်တယ် လို့ ယူနေတာ။
– …အနှစ်သာရလို့ ထင်မိရ လောက်အောင်
“အနှစ်သာရဟုတ်တယ်” “အဖတ်တင်တယ်” လို့ ထင်နေတာ။
တရစပ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေမှု ကို ငါ ခံစားနေရတယ် ထင်နေတာ။
– …ဒီလိုလုပ်မှ မှန်တယ် ဟိုလိုလုပ်မှ မှန်တယ်လို့ ထင်မိရလောက်အောင်
အ၀ိဇ္ဇာ၏ တရစပ် လှည့်စား ပြုလုပ်မှု တွေကို
ငါ့ပြုလုပ်မှု ငါ့အားထုတ်မှု လို့ ထင်နေတာ….
တ က ယ့် အ မှားအ စ စ် ပါ…
42. Don’t worry about what is wrong.
Real wrong is
-Taking upon ever-new impermanent nature which seem to beapain orafeeling as “my pain” , “my feeling”.
-Assuming upon ever-new impermanent nature which seem to beahappiness orasuffering as “my happiness”, or “my suffering”.
-Identifying upon ever-new impermanent nature which appear to beabody,asensation,akindness,ahatred,ajealousy orawrong -etc, as “my emotion”, “my body” , “my sensation” , “my kindness”, “my hatred”, “my jealousy” or “my wrong” -etc.
၄၃။ ဘာဖြစ်မှာလည်း မ မေး နဲ့တော့၊ ဘာဖြစ်မှာလည်း သိချင်မနေနဲ့တော့။
ဒါပဲ ဆိုတာ မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှ၊ စဉ်းစားသမျှ၊ တွေ့ကြုံရသမျှ၊ ခံစားရသမျှ တွေအပေါ် အဟုတ်ထင်ပြီး လောဘ-ဒေါသ-သောက-ကိလေသာတွေ တရစပ်ဖြစ်အောင် အယူမှား-အ၀ိဇ္ဇာ ၏ မပြတ်တရစပ်လှည့်စားပြုလုပ်နေမှု။ ဒါပဲ (ဒီအမှန်တရားပဲ) ဖြစ်နေခြင်းကို မမေ့ဖို့-သတိရနေဖို့ကိုသာ အဓိကထားနေပါ။
43. Do not want to know what had happened in past & what will happen in future.
In the past, the same truth was happening.
In the present, so is happening it.
In the future, so will happen it.
The same truth is actions of misunderstanding which create every feeling, every sensing, every thinking as reality (existence foracertain period) so that every greed, hatred, jealousy, envy, worries, ignorance, defilement, stress, and problem -etc, is being happened continuously & endlessly.
Please just try to be mindful upon only the same original truth.